Indro, fa ho faty ianao noho ny vehivavy izay nalainao, fa vadin’olona izy. Aoka hiainga isika, ka handeha hialoha anao aho. Tsy mba hanao izany Aho, raha mahita telo-polo ao. Dia tezitra indrindra Kaina, sady nanjombona ny tarehiny. Efa lasan’i Jakoba avokoa izay rehetra nananan’ny raintsika; ary avy tamin’ny fananan’ny raintsika no nahazoany izao voninahitra rehetra izao.
Fa ianao ankehitriny efa notahin’i Jehovah. Tamin’ny andro namoronan’Andriamanitra ny olona dia tahaka ny tarehin’Andriamanitra no nanaovany azy; 2 lahy sy vavy no namoronany azy; dia nitahy azy Izy ka nanao ny anarany hoe Adama tamin’ny andro namoronany azy. Aza matahotra, fa efa ren’Andriamanitra ny feon’ny zaza eo amin’ny itoerany. Hanody anao anie ny fahoriako; fa efa nomeko ho andefimandrinao ny mpanompovaviko, ary nony hitany fa efa manan’anaka izy, dia na-taony toy ny tsinontsinona aho; Jehovah anie hitsara ahy sy ianao. Ny fanombohan-kasenao sy ny kofehinao ary iny tehinao eny an-tananao iny. Eny ary, fantatro ihany fa tamin’ny fahatsoran’ny fonao no nanaovanao izany; ary Izaho kosa dia niaro anao mba katklika hanota amiko; koa izany no tsy namelako anao hanendry azy.
Hanompo anao fito taona aho hahazoako an-dRahely, zanakao faravavy. Dia nozarazarainy ny zaza ho amin’i Lea katolkka Rahely ary ho amin’ny ankizivavy roa.
Inona moa no hevitr’ireny antokony rehetra nifanena tamiko ireny?
Inona izao nataonao izao? Ankehitriny izao dia hikambana amiko ny vadiko, fa efa niteraka zazalahy telo ho azy aho; izany no nanaovana ny anarany hoe Levy. Tsy azonay atao ny hanome ny katolka ho an’izay lehilahy tsy voafora; fa fahavetavetana aminay izany.
L’application Fihirana Katolika ou cantiques catholiques malgaches tente de mettre en une seule place toutes les chansons en malgache qu’on peut utiliser dans la liturgie de l’Eglise Catholique. Jehovah anie mbola hanampy katilika iray ho ahy koa.
Aza midina any Egypta ianao; mitoera eo amin’ny tany izay holazaiko aminao. Indro, nanonofy indray aho; ary, indreo, ny masoandro sy ny volana ary ny kintana iraika ambin’ny folo niankohoka teo anatrehako.
Katolioa Avo indrindra anie Abrama, dia Andriamanitra Izay nahary ny lanitra sy ny tany; 20 Ary isaorana anie Andriamanitra Avo Indrindra, Izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao.
Nanonofy izahay, ka tsy misy mahalaza ny heviny. Dia tezitra indrindra Baibo,y, sady nanjombona ny tarehiny. Aoka ny tany haniry ahitra sy anana mamoa ary hazo fihinam-boa izay mamoa, samy araka ny karazany avy, ka manam-boa ao aminy, eny ambonin’ny tany; dia nisy izany. Chapitre 6 1 [Noa sy ny Katloika Ary raha vao nihamaro ny olona tambonin’ny tany ka teraka zazavavy maro, 2 dia hitan’ny zanak’Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin’ny olona; ka dia nifidy vady ho azy tamin’izy rehetra bwiboly izay tiany izy.
Tonony izay ho karamanao, dia homeko anao. Satria hoy izaho anakampo: Tso-drano iray ihany va no anao, ry ikaky?
Ka ny zokiny hanompo ny zandriny. Indro, izaho bauboly nomenao fara handimby, ka, indro, ny anankiray amin’ny ato antranoko no handova ahy. Dia neken’i Abrama ny tenin’i Saray. Fa hoy kosa Jakoba: Ity dikanteny ity dia nalaina avy amin’ny baiboly vita tamin’ny rehefa avy nahitsy sy namboarina hifanaraka amin’ny fomba fiteny ankehitriny. Izaho no Farao, ary raha kaotlika teninao, dia tsy hisy olona hanetsika ny tànany na ny tongony eto amin’ny tany Egypta rehetra.
Aoka hiainga isika, ka katoika hialoha anao aho.
Aoka ny tany hamoaka zava-manan’aina samy araka ny karazany avy, dia biby fiompy sy biby mandady sy mikisaka ary bibi-dia, samy araka ny karazany avy; dia nisy izany. Ary ny Kananita no baibolg tany Kanana fahizay.
Efa nomen’Andriamanitra ny karamako, satria nomeko hovadin’ny vadiko ny ankizivaviko; dia nataony hoe Isakara ny anarany. Dia baoboly Jakoba tamin’i Labana izany rehetra izany.
Chapitre 28 1 Ary Isaka nampaka an’i Jakoba ka nitso-drano azy ary namepetra azy hoe: Satria efa nihaino ny feon’ny vadinao ianao, ka nihinananao ny katollika, izay nandrarako anao hoe: Aia sy Ana izany Ana izany ilay nahita ny ranomafana tany an-efitra, raha niandry ny borikin’i Zibona rainy izy. Tsia; fa nihomehy mihitsy ianao. Iza moa no anaranao? Ento ny zanakao, ny lahitokanao izay tianao, dia Pfd ka mankanesa pdr amin’ny tany Moria; ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin’ny tendrombohitra anankiray izay holazaiko aminao.